मृत्युसँग डाक्टर पनि डराउँछन्
दिनेश गौतम काठमाडौं, ७ माघ
माघको ठन्डी । झरीपछि उघ्रिएको नीलो आकाश । शिवपुरीको डाँडामा देखिने हिमाल । हिमालबाट आउने चिसो सिरेटो । सूर्यको प्रकाश चारैतिर फैलिएको छ तर चिसो सिरेटोले सूर्यको ताप मधुर छ । घमाइलो दिन ।
शिवपुरीको काखमा रहेको मन्डिखाटार । त्यहीँको एक क्याफेमा प्रतीक्षारत थिए, डाक्टर राजेन्द्र पाण्डे, सँगै प्रतीक्षरत थियो कफी ।
६०औँ वसन्त पार गरेका डा. पाण्डे चिकित्सक हुन् । सेतै फुलेको पातलो कपाल । मलिनो स्वर । हेर्दै साधारण व्यक्तित्व । चिसो, धुलो र धुवाँले घाँटी समातेको छ । बेलाबेलामा ख्वाक्क खोकी । बोल्दाबोल्दै बेलाबेलामा रोकिने आवाज ।
‘अन्तर्वार्ता दिन म कुनै चर्चित पात्र होइन, सामान्य नागरिक हुँ । सडकमा जसरी अरू हिँडेका छन्, त्यस्तै पात्र हुँ’, कफीको चुस्कीसँगै कुराको पोयो फुकाए उनले ।
हरेक मान्छेसँग कुनै न कुनै कथा हुन्छ । कतिले सुनाउँछन्, कतिले आफैँभित्र दबाएर राख्छन् ।
पाण्डेको कथा भन्दा पनि उनका अनुभव प्रेरणादायी छन् ।
पाण्डे पेसाले मेडिकल डाक्टर । झण्डै २८ वर्ष उनले लन्डनमा चिकित्सकका रूपमा कामा गरे । अब ५–६ महिनापछि अवकास हुँदै छन् ।
नेपाल आएको सन्दर्भमा हामीसँग उनले आफ्नो ‘डाक्टरी’ अनुभव साटेका छन् ।
नेपालको सुदूर जिल्ला बैतडी । आजको जस्तो सहज थिएन । काठमाडौं आउनु ठूलै मानिन्थ्यो । बैतडीबाट काठमाडौं आउनभन्दा भारत जान सहज हुने । अहिले पनि पश्चिमका नेपाली भारत नै जान्छन्, कति पढ्न कति रोजगारीका लागि ।
उनी सानै उमेरमा पढ्नका लगि बैतडीबाट नैनीताल लागे । हजुरआमाको रेखदेखमा उनी ४–५ वर्ष नैनीतालमै बसेर पढे । त्यसैले, उनको स्मृतिमा बैतडीको कुइनेटो धुमिल मात्र छ ।
नैनीताल टु काठमाडौं
नैनीतालमा केही वर्ष पढेपछि काठमाडौं आउने अवसर पाए । परिवारका साथमा उनी काठमाडौं आएर आनन्दकुटीबाट सन् १९७४ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।
फलामे ढोका पार गरेका पाण्डे अबको यात्रा कता बढाउने भन्ने दोधारमा थिए । एक युवाका अनगिन्ती सपना । सुन्दर भविष्य उनको मानसपटलमा घुम्थ्यो । उनले रोजे साइन्स विषय अनि अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी पनि सहजै पास गरे ।
कलेज जीवन उनको मानसपटलमा ताजै छ ।
उनको पढ्ने हुटहुटी अझै सकिएको थिएन । आईएस्सीपछि बीएस्सी र एमबीबीएसमध्ये एक रोज्नुपर्थ्याे । उनले एमबीबीएस नै रोजे अनि डाक्टर बन्न सपना बुनेर पाकिस्तान लागे ।
‘डा. नै किन ?’
त्यसबेला ‘च्वाइस’ थोरै थियो । अहिले धेरै कोर्स पढ्न सकिन्छ । त्यतिबेला डाक्टरलाई भगवान् मानिन्थ्यो । समाजमा इज्जत र सम्मान पनि थियो । काम पनि, समाज सेवा पनि, जुन अरू पेसाले दिँदैनथ्यो ।
पाण्डे मुस्कुराउँछन् ।
एमबीबीएस सकिएपछि नेपाल फर्किए । उनी चाहन्थे, नेपालमै केही गर्नुपर्छ । अनि कान्ति बाल अस्पतालमा उनले काम सुरु गरे । झण्डै ७ वर्ष उनले कान्तिमा काम गरे । बालबालिकाको उपचारमा अहोरात्र खटिन्थे ।
नयाँ कुरा जान्ने र सिक्ने उनको स्वभाव । फेरि बालबालिकाको स्पेसल कोर्स गर्ने निर्णय गरे ।
बालबालिकाको स्पेसल कोर्स पूरा गरेर उनी नेपाल फर्किने सोचमा थिए । बेलायतबाट उनले स्पेसल कोर्स पनि पूरा गरे ।
तर, एकपछि अर्को जिम्मेवारी थपिँदै गयो । बढ्दो उमेरसँगै परिवारको आग्रहमा उनले विवाह गरे । जिम्मेवारी थपिँदै गयो । उनका लागि परिवार महत्त्वपूर्ण बन्यो, परिवारसँगै आफ्नो करियर पनि । उनका लागि समाज, देश भन्दा पनि परिवार अगाडि आउँथ्यो । नाम कमाउने भन्दा पनि परिवार हेर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
अर्कोतर्फ, नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको थियो । धेरै युवा पलायन भएका थिए । नेपालबाट नेपाली बेलायत पुग्थे ।
बेलायतमा पढिसकेपछि नेपाल फर्किएका पनि काम नपाएर फेरि बेलायत नै फर्किन्थे । त्यो देखेर उनको नेपाल फर्किने सोच सेलाउँदै गयो ।
आफ्नो सन्तानको शिक्षादीक्षाका लािग पनि उनी बेलायतमै बसे । बेलायत बस्नु उनका लागि रहर भन्दा पनि बाध्यता थियो । उनको नेपाल फर्किने सपना टुट्यो ।
नेपालमा सेवा गर्न नपाएकामा उनलाई पछुतो लाग्छ रे !
बेलायतको स्वास्थ्य सेवा
बेलायतमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा छ । बिरामी सिधै हस्पिटल जाँदैनन् । पहिले जनरल प्राक्टिसमा जान्छन् । जनरलबाटै उपचार हुने भए अस्पताल पुग्नै पर्दैन । अस्पातल जानै परे जनरलमार्फत् जानुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा सीमित बेड हुन्छन् । इमर्जेन्सी भए मात्र अस्पताल जान पाइन्छ ।
बिरामीलाई वार्डमा राखिन्छ । बिहान मिटिङ हुन्छ । बिरामी कस्तो हो ? कसरी उपचार गर्ने ? के गर्ने भन्ने सल्लाह र निर्णय हुन्छ मिटिङमा ।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा भएकाले कतिले दुरूपयोग पनि गर्छन् । सामान्य बिरामी पनि हस्पिटल पुग्छन् । बिरामीको अवस्था हेरेर उपचार गरिन्छ । सुरुमा नर्सले बिरामी कस्तो हो भनेर हेरेपछि तत्काल उपचार गर्नुपर्ने हो कि पछि गर्दा पनि हुने हो, निर्णय लिइन्छ ।
सामान्य बिरामीले महिनौँ कुरेर पनि स्वास्थ्य सेवा लिन्छन् । भर्ना गर्नुपर्ने हो भने वार्डमा राखिन्छ नत्र घर पठाइन्छ । बिरामीलाई के औषधि दिएको हो ? के भएको हो सबै रेकर्ड राखिन्छ । बिरामी केही भएमा वा मुद्दा परेमा त्यही रेकर्डको आधारमा फैसला हुन्छ ।
उनी बेलायतको उपचार प्रक्रिया देखेर छक्क पर्छन् ।
राजादेखि नेतासम्म सरकारी अस्पातलमै जान्छन्
एक पटक बेलायतका राजाको हात भाँचियो । उनी प्राइभेट अस्पतालमा उपचार गर्न गए । धेरै विरोध भयो । बेलायतका राजादेखि प्रजासम्मले उस्तै उपचार सेवा पाउँछन् । महँगा र विदेश उपचार गर्न जाँदैनन् । उनीहरू सरकारी अस्पतालमै नियमअनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन्छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य अवस्था देख्दा उनलाई उदेक लाग्छ ।
मर्छ भनेको बिरामी बाँचेर भेट्न आउँदा...
डा. पाण्डेले हजारौँ बेलायती नागरिकको उपचार गरेका छन् । उनले उपचार गरेका केही बिरामी बाँच्दैनन् भनेका पनि पछि भेट्न आएका छन् ।
कहिल्यै अस्पताल नजाने मान्छे एक दिन अस्पताल आए । कुरा गर्दागर्दै ती व्यक्ति ढले । उनलाई ‘हार्ट अट्याक’ भयो । अन्तिम अवस्थामा पुगेका थिए ती ।
डा. पाण्डेले उनलाई इमर्जेन्सीमा पुर्‍याए । त्यसपछि ती बिरामी सम्पर्कमा आएनन् । उनले सोचेका थिए, ती बिरामी मरे होलान् । झण्डै २ महिनापछि ती बिरामी उनलाई धन्यवाद दिन आए ।
‘तपाईंले बचाउनुभयो, धन्यवाद डाक्टर !’
उनको कुरा सुनेर पाण्डे पुलकित भए ।
‘कुनै बिरामी मर्दैन भन्ने लाग्छ, मर्छ । कुनै बिरामी बाँच्दैन भन्ने लाग्छ, बाँचेर आउँछ । बाँचेर आउँदा डाक्टरलाई जति खुसी लाग्छ । गुमाउँदाको दुःख पनि उत्तिकै लाग्छ’, पाण्डे भन्छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा
उनका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य सेवा पनि राज्यले दिनुपर्ने हो । सरकारी सेवा प्रभावकारी नभएपछि प्राइभेट क्षेत्र हावी भएको हो । स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय बनेको उनको धारणा छ ।
यहाँ मान्छेले कसरी पैसा तिर्छन् ? सोच्दा पनि अत्यास लाग्छ रे उनलाई । ‘नेपाल आयो भने कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्छ । हुनत समाज जस्तो छ, त्यसैगरी चलेको छ’। पाण्डे भन्छन्, ‘क्यान्सरको अन्तिम स्टेपमा बिरामी पुगेको हुन्छ । क्यान्सरको अन्तिम स्टेपको बिरामी ५–६ महिनाभन्दा बाँच्दैन तर यहाँ उपचार गरिरहेको हुन्छ ।’
पैसा नभएको मान्छेले कसरी उपचार गराउने ? अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामीलाई उपचार गराउनुको के अर्थ ? घर खेत सकाएर उपचार गराउँछन् । उपचार सम्भव छैन भन्ने थाहा छ तर डाक्टरले पनि सम्झाएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामीलाई नदुख्ने औषधि दिइनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘परिवारको वरिपरि राखेर उसको इच्छा पूरा गराउने हो । फेरि सास भएसम्म आस हुन्छ पनि भनिन्छ । घर खेत बेचाएर अन्तिम अवस्थाको बिरामीको उपचार गराउनु राम्रो होइन’, उनी भन्छन्, ‘मृत्युभन्दा अगाडि अब उपचार सम्भव छैन भन्ने थाहा हुन्छ । त्यो कुरा बिरामी र आफन्तलाई भन्नुपर्छ ।’
नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति उनी चिन्तित देखिन्छन् ।
गुगल नै डाक्टर
विश्वमा कहाँ कस्तो प्रक्रियाबाट उपचार भइरहेको छ, सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । पहिले किताब पढेर वा सिनियरबाट सिकेर जानिन्थ्यो तर अहिले इन्टरनेटले सजिलो बनाएको छ । अमेरिकामा कसरी बिरामीको उपचार हुन्छ ? बेलायतमा कस्तो छ ?
इन्टरनेटको माध्यमबाट तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले डाक्टर नै गुगल भएको छ । इन्टरनेटले मानिसको ज्ञान पनि बढाएको छ । सबै कुरा डाक्टरलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन । रोगबारे धेरै बिरामीलाई नै थाहा हुन्छ । आफूलाई थाहा छैन भने डाक्टरले भन्न सक्नुपर्छ । नजानेको, नबुझेको रोगबारे उपचार गर्नुहुँदैन । विषय विज्ञसँग सल्लाह गरेर मात्र उपचार गर्नुपर्छ ।
नेपाल र नेपालीलाई सहयोग
बेलायत बसे पनि उनी नेपालीको दुःखमा साथमै रहन्छन् । भूकम्प जाँदा होस् या बाढी पहिरोमा, बेलायतबाट आर्थिक सङ्कलन गरेर नेपालीलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हेल्थ एक्सचेन्ज नेपालमार्फत उनी बेलायतका डाक्टर र उपकरण नेपाल ल्याएर विभिन्न अस्पातलमा तालिम र उपचारमा संलग्न रहन्छन् ।
नेपाल र नेपालीप्रति उनी यसरी पनि माया दर्शाउँछन् ।
डाक्टरलाई पनि मृत्युसँग डर लाग्छ
बिरामीको उपचारको क्रममा डाक्टरलाई डर लाग्नुपर्छ । डर नभएपछि हो लापरबाही हुने । त्यसैले डर जरुरी छ भन्छन् उनी ।
बेलायतमा १६ वर्षको केटाले आत्महत्या गर्‍यो । उसको बुबालाई क्यान्सर भएको थियो । उसको पनि मृत्यु भयो । त्यसबेला पाण्डेको आँखा रसाएको थियो । कहिलेकाहीँ बिरामीको अगाडी आँसु झर्ला कि भन्ने डर लाग्छ रे उनलाई ।
डरले डाक्टरलाई सतर्क बनाउने उनी बताउँछन् ।
एउटा डाक्टरले हजारौँ मृत्युलाई देखेको हुन्छ । कतिलाई लाग्छ, कति कठोर डाक्टर ! तर, डाक्टरलाई पनि मृत्युदेखि डर लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीबाट धेरै सिक्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।
पाण्डे भन्छन्, ‘डरायो भने मर्नुअघि नै मरिन्छ ।’
भाग्यले जन्मिन्छ मान्छे
जन्म र मृत्यु प्राकृतिक प्रक्रिया हो । मान्छे भाग्यले जन्मिन्छ तर जन्मिँदा भन्दा मृत्युमा मान्छे दुखी हुन्छ । ‘जन्मनु पाउनु हो भने मृत्यु गुमाउनु हो । गुमाउँदा जो कोहीलाई पनि दुःख लाग्छ’, यसो भनेर पाण्डे केही बेर मौन रहन्छन् ।
कुनै महत्त्वकाङ्क्षा छैन
उनको जीवनमा कुनै महत्त्वकाङ्क्षा छैन । बाटोमा हिँड्ने मानिसको जस्तै जिन्दगी भन्ने लाग्छ उनलाई ।
‘एक सामान्य नागरिक । ठूलो काम गरेँ भन्ने पनि छैन । डाक्टरको कामै सर्जरी गर्ने हो । ठूलै काम गरेँ भनेर फुर्ती लगाउनु पनि छैन । जे पढियो त्यही काम गरियो’, पाण्डे भन्छन् ।
बरु नेपाल आएर काम गर्नुपर्थ्याे भन्ने लाग्छ उनलाई । ‘त्यो पूरा हुन सकेन तथापि दुखी हुनुपर्ने कारण छैन’, पाण्डे भन्छन् ।
उनी भगवानप्रति आस्था राख्छन् ।
केही समयका लागि नेपाल आएका पाण्डे छिट्टै आफ्नै मुकाममा फर्किन्छन् । ‘८१ वर्षीया आमाका लागि पनि अब वर्षको एक पटक नेपाल आउँछु’, पाण्डे लामो सास लिन्छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, ७ माघ २०७६, १०:४८:००